Ireo logs sy balkon no mahita ny mponina ao an-tanàna isan'andro, kanefa matetika izy ireo no mifangaro. Ireo zavatra ireo dia somary mitovitovy, nefa manana fahasamihafana lehibe hafa izy ireo. Ireo sy ireo hafa, dia mety ho miredareda na misokatra, manana tafo amboniny. Ankehitriny, mponina maro no nanomboka nanasitrana ny fivoahany kely mba hampiasana azy ireo ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Ny fividianana trano any amin'ny faritra vaovao dia tokony hahafantatra ny fomba hanavaka ny loggia avy amin'ny balcony ny tsirairay amintsika. Ity tranga ity dia misy fiantraikany amin'ny vidin'ny efitrano. Ny trano miaraka amin'ny loggias dia lafo kokoa noho ny amin'ny balkonina.
Famaritana ny loggia sy balcony
Ny balkon dia raki-pirahalahiana mifangaro ary avy amin'ny fiaramanidina avo lenta. Tsy maintsy manana fefy fiarovana izany. Ny Loggia dia sehatra lehibe natsangana tao amin'ny efitrano, ka ny lafiny iray ihany no misokatra ho any ivelany. Indraindray izy ireo dia manamboatra lavarangana balkon. Manana ampahany kely amin'ilay tranokala izy ireo dia afaka mivoaka avy ao amin'ny fasan'ny trano, ary ny ampahany hafa amin'ny fananganana dia naorina ao amin'ilay trano. Ny halalin'ny fihenan'ny lôgôgia dia voafetra ihany amin'ny fahatakarana io trano io, izay mitaky masoandro ihany koa.
Inona no tsara kokoa - loggia na balkon?
Ny famolavolana tsirairay dia afaka mahita ny pluse na ny minus, ka ny fifandirana momba izany dia efa nitsahatra ela. Lasa lavitra kokoa ny loggia ary eto dia azonao atao ny manamboatra kitapo kely na sofina, tabilao kafe na fanaka hafa. Izy io dia misy andaniny telo voaaro amin'ny tranobe ary noho izany dia mahamay kokoa noho ny balcony misy rivotra. Saingy ny tompon'ireo trano misy loggia dia somary tsy misy tara-pahazavan'ny rivotra hita taratra amin'ny rindrina. Raha miorina eo avaratra izy dia tsy maintsy mibanjina foana. Efa manana onjam-panorenana ny loggia, ary mila miaro azy manokana ny balcony. Raha azo atao, dia mora kokoa ny misintona sy mampiasa azy amin'ny hatsiaka, ary miditra ao amin'ny efitrano kelikely kely. Misy fahasamihafana hafa eo amin'ny balcony sy ny loggia. Ny takela-kazo misy ny loggia dia mifatotra amin'ny lafiny telo, ary ny toerany dia ambony lavitra noho ny an'ny balkon. Izany no mahatonga azy kokoa hitondra mitondra entana.
Saika ny lôgôjia rehetra dia mitovy amin'ny an'ny hafa. Saingy misy karazana balkon eto. Ireto misy karazana efatra tena lehibe:
Ny mahazatra dia mihantona lavarangana. Ny fanamboarana azy dia mifatotra amin'ny vatofantsika sy ny vatosoa manokana. Azo jerena eo amin'ny trano avo roa heny izy ireo. Amin'izao fotoana izao izy ireo dia nanomboka ny felam-baravarankely maro ary nanaisotra ireo balkon mba hampiasaina feno manontolo andro isan-taona amin'ny endriky ny trano fandroana kely na trano kely mihitsy aza.
Ny trano sasany, eo amin'ny gorodona voalohany na faharoa, dia nanomboka nanamboatra balkon-side. Io famolavolana io dia mitaky fototra fototra sy fanamafisana orinasa matanjaka. Azonao atao anefa ny manangana azy raha tsy manana trano maimaim-poana any akaikin'ny tranonao ianao. Izy io dia ny fananan'ny mponina rehetra ao amin'ny trano fanorenana ary mila ny faneken'izy ireo ianao. Raha toa ka matanjaka tsara ny lavarangana tahaka izany, dia azo havaozina ho efitrano fandraisam-bahiny izany.
Misy balaonina misy lavarangana misy balkon, izay mifatotra eo amin'ny fasan'ny trano. Ny ampahany hafa amin'ny enta-mavesatra dia alaina amin'ny metaly metaly, miorina eo amin'ny fototra, amidy eny amin'ny lampihazo eo ambanin'ny balkon. Ireo rafitra ireo dia mitovy amin'ny balcony mifatotra, nefa mora kokoa.
Ny tsy mendrika sy tsy mahomby indrindra dia ny balcony frantsay. Manana faritra tena ilaina izy ireo, mampiseho faritra kely eo amin'ny varavarankelin'ny balcony. Afaka mametraka ny tongony eo fotsiny ianao mba hifoka rivotra - Voalaza aloha fa "hivoaka eny amin'ny balcony". Amin'ny ankapobeny dia voaravaka fefy misy loko marevaka izy io ary tsy misy afa-tsy ny asa haingana. Ity trano balkon ity dia manatsara ny endrik'ilay tranobe manjavozavo.
Manantena izahay fa ny lahatsoratra kely, izay mamaritra ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny balcony sy ny loggia, dia hanampy anao rehefa misafidy trano. Bilaogera mora kokoa rehefa mividy, fa ny loggia dia somary miasa kokoa. Saingy tsara kokoa ny manana iray farafahakeliny noho ny tsy misy na inona na inona. Ny tombontsoa sy ny fananana dia mihoatra lavitra noho ny vidiny fanampiny rehefa mividy trano. Ary ireo trano tsara indrindra amin'ny marina dia ireo izay manana lôgôjia sy balkon.
Mampifandray biriky iray misy tsipika roa
Fonosana varavarankelin'ny varavarankely
Ahoana ny fisafidianana sehatry ny lakozia?
Vovonan'ny trano ao amin'ny tranon'olon-tsotra
Takela-kazo vita amin'ny varavarankely
Kitapo maoderina amin'ny tanana manokana
Môtô avy amin'ny rattan voajanahary - endri-javatra azo ampiasaina ao anaty efitrano maoderina
Ny karipetra ataon'ny ankizy eo amin'ny tany
Bronchopneumonia amin'ny olon-dehibe - fitsaboana
Mihabetsaka ny granulocyte tsy matavy - inona no dikan'izany?
Misy Mpanjakavavin'ny Spades ve?
Sarcoma amin'ny havokavoka
Ny Printsy William dia nanaratra ny lohany nalyso
Kilalao ho an'ny alika amin'ny tanany manokana
Ahoana no hianaranao sakafo mahandro?
Taom-baovao tany Alemana - fomban-drazana
Icon "Affection" - ny dikany, inona no manampy?
Ny ambiny eo amin'ny sahan'ny voa dia malahelo
Lavadrano Teletskoe - fitsaharana amin'ny havokavoka